Ahoana ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny poketra nomerika | Martech Zone
Ny tahan'ny fanovana finday dia maneho ny isan-jaton'ny olona nisafidy ny hampiasa ny rindranasa findainao / tranokala voavolavola finday, avy amin'ny totalin'ireo natolotra azy ireo. Ity isa ity no hilaza aminao tsara toy inona ny fampielezan-kevitry ny findainao ary, amin'ny fijerena ny antsipiriany, ny zavatra tokony hatsaraina.
Betsaka raha tsy izany varotra mahomby Hitan'ny mpivarotra fa mihalavo ny tombom-barotra azon'izy ireo raha ny mpampiasa finday no resahina. Ny tahan'ny fandaozana ny sarety fiantsenana dia avo dia mahatsikaiky ho an'ny tranonkala finday, ary raha tsara vintana ianao ny hahatonga ny olona hijery ny tolotra atombohany.
Fa ahoana no ahatongavan'izany, raha toa ka mitombo am-polony tapitrisa isan-taona ny isan'ny mpividy finday?
Ireo finday dia nivoatra lavitra tamin'ny tanjony voalohany. Raha manao ny marina isika, ny antso sy ny lahatsoratra dia tsy ny lahasa voalohany amin'ireo fitaovana marani-tsaina ho an'ny ankamaroan'ny mponina intsony. Ny fitaovana finday iray dia nanjary fanitarana ny olombelona maoderina ary manompo saika ny zava-kendrena azo antoka rehetra, manomboka amin'ny sekretera malaky ka hatramin'ny sarety fiantsenana an-tserasera.
Izany no antony tsy fahitana fahitana telefaona finday ho mpanelanelana hafa fotsiny. Ireo fampiharana, tranokala ary fomba fandoavam-bola dia tsy maintsy ahitsy sy havaozina ho an'ireo fitaovana ireo manokana. Iray amin'ireo fomba revolisionera indrindra amin'ny fanaovana fifanakalozana finday ny fitantanana vola ewallet, izay lohahevitr'ity lahatsoratra ity.
Fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny finday
Voalohany indrindra, andao hazava ny zavatra iray. Mandray an-tanana ny varotra finday ny tontolon'ny e-varotra haingana dia haingana. Tao anatin'ny dimy taona monja dia nahita fiakarana efa ho 65%, ankehitriny mitazona ny 70% amin'ny totalin'ny e-varotra. Ny fiantsenana finday dia eto mba hijanonana ary handray ny tsena mihitsy aza.
Mahagaga ihany fa ny fandaozana ny sarety fiantsenana dia mbola avo lavitra kokoa amin'ny tranokala finday noho ny atiny mitovy hita ao amin'ny solosaina birao. Olana lehibe ho an'ny rehetra izany, indrindra ireo mpivarotra enta-madinika sy orinasa vaovao amin'ny tetezamita. Fa maninona no mitranga izany?
Voalohany indrindra, misy ny miharihary. Ireo tranokala finday dia matetika no tsy dia ampiharina, ary misy antony marim-pototra. Betsaka ny fitaovana, habe, browser ary rafi-piasa izay mila tranokala mahasoa finday mendrika loharanon-karena sy fotoana be dia be.
Ny fikarohana sy ny fitetezana tranokala finday, miaraka amina entana an-jatony na an-jatony dia tena mandreraka sy mahasosotra. Na dia mafy loha aza ny mpanjifa mandalo izany rehetra izany ary miroso amin'ny fizaham-bola, dia tsy betsaka ny hozatra hiditra ao anatin'ny fizotry ny fandoavam-bola.
Misy vahaolana kanto kokoa. Mety ho somary lafo kokoa amin'ny voalohany, nefa azo antoka fa mandoa tena haingana be. Ny apps dia vahaolana tsara kokoa ho an'ny finday. Natao manokana ho an'ny tanjon'ny fampiasana finday izy ireo ary mahafinaritra kokoa ny mijery azy. Ary, araka ny hitantsika, ny fampiharana finday dia manana taham-pahafaham-barana ambany kokoa noho ny tranokala sy ny tranokala finday.
Ireo mpivarotra ambongadiny izay nifindra tamin'ny tranokala finday ho any amin'ny apps dia nahita fitomboana be amin'ny fidiram-bola. Niakatra 30% ny fomba fijerin'ny vokatra, ny entana nampidirina tamin'ny harona fihenam-bidy dia nitombo 85% ary ny fividianana ankapobeny dia nitombo 25%. Raha tsorina, ny tahan'ny fiovam-po dia tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fampiharana finday.
Ny tena mahasarika an'ireo mpampiasa azy dia ny fomba fitetezana tsy manam-paharoa satria natao ho an'ny finday ihany. Ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2018 dia nampiseho fa ny ankamaroan'ny mpanjifa dia manome lanja ny fahafaham-po sy ny hafainganana, ary koa ny fahafaha-mividy fividianana tsindry iray amin'ny alàlan'ny e-wallet sy carte de crédit voatahiry.
Ny hatsaran'ireo poketra nomerika dia amin'ny fahatsorany sy ny filaminana anatiny. Rehefa vita ny fifanakalozana amin'ny alàlan'ny kitapom-bolongana nomerika dia tsy misy ny angona momba ny mpividy. Ny fifanakalozana dia ekena amin'ny isa tokana ananany, noho izany dia tsy misy na iza na iza ao anatin'ny fizotrany afaka mihazona ny mombamomba ny carte de crédit an'ny mpampiasa. Tsy voatahiry amin'ny findain'ilay mpampiasa akory izy io.
Ny kitapom-bola dizitaly dia miasa amin'ny maha proxy eo anelanelan'ny vola sy ny tsena. Ny ankamaroan'ireo sehatra ireo dia manolotra fomba fandoavam-bola an-tserasera izay antsoina hoe fividianana tsindry tokana, midika izany fa tsy ilaina ny mameno endrika sy manome vaovao rehetra - raha toa ka mamela ny fandoavam-bola amin'ny e-wallet ny fampiharana.
Ny sasany amin'ireo poketra nomerika malaza indrindra ankehitriny dia:
Araka ny hitanao, ny sasany amin'izy ireo dia voafaritra manokana amin'ny OS (na dia manao andrana amin'ny crossovers sy fiaraha-miasa aza ny ankamaroan'izy ireo), fa ny tena mahaleo tena misy poketra nomerika manerana ny sehatra rehetra ary tena malefaka. Manolotra fanampiana izy ireo amin'ny carte de crédit sy debit marobe, ary koa ny fandoavam-bola ary ny fanampiana cryptocurrency.
Na hanangana rindranasa iray hatramin'ny voalohany ianao mba hifanaraka amin'ny filanao manokana sy ny fitakiana hatsaranao, na hampiasa sehatra e-varotra vonona, dia ilaina ny fampidirana kitapo nomerika. Raha mampiasa sehatra ianao dia efa natao ho anao ny ankamaroan'ny asa mafy.
Miankina amin'ny karazana orinasa sy toerana misy anao, ny sehatra e-varotra dia hanampy anao hisafidy e-poketra tsara indrindra ho an'ny vondrona kendrenao. Ny hany sisa hataonao dia ny fampiharana ireo fandoavambola ireo.
Raha te hanangana hatramin'ny voalohany ianao, dia ho fahendrena ny manomboka amin'ny safidy e-wallet isan-karazany ary araho ny refy. Ny kitapom-bola nomerika sasany dia mety ho be fangatahana kokoa noho ny hafa, ary miankina betsaka amin'ny toerana misy anao izany, entana amidinao sy ny taonan'ny mpanjifanao.
Misy torolàlana maromaro eto.
Aiza ny mpanjifanao? Ny faritra rehetra dia samy manana ny tiany, ary mila mahay mandanjalanja amin'izany ianao. Fitsipika lamba firakotra ho an'ny fivarotana eran-tany dia ny PayPal. Fa raha fantatrao fa ny ampahany betsaka amin'ny varotrao dia avy any Shina dia tokony ampidiro ao ny AliPay sy WeChat. Aleon'ny mpanjifa federasiona rosiana ny Yandex. Eoropa dia manana tohodrano ho an'ny mpampiasa Skrill, MasterPass ary Visa Checkout.
Iza amin'ireo fitaovana no malaza indrindra? Jereo ireo metatrao. Raha mampiasa iOS ny ampahany betsaka amin'ny mpividy anao dia fahendrena ny mampiditra ApplePay. Toy izany koa ny Android Pay sy Samsung Pay.
Firy ny faharetan'ny mpanjifanao? Raha mifanerasera amin'ny ankamaroan'ny tanora ianao, ao anatin'izany ny poketra nomerika toa an'i Venmo dia sarotra tokoa. Betsaka ny olona amin'ny taona 30-50 no miasa lavitra na amin'ny maha freelancer azy ary miankina amin'ny serivisy toa an'i Skrill sy Payoneer. Fantatsika rehetra fa ny Millenial dia tsy ny antokony marary indrindra, ary azo antoka fa handao ny fividianana raha tsy hitany ny safidin'ny fandoavany ankafiziny.
Inona ny entana amidinao? Ny varotra samihafa dia misarika ny saina samy hafa. Raha miloka no filokanao, WebMoney ary sehatra mitovy amin'izany izay manome voucher dia safidy tsara satria efa malaza eo amin'ny fiarahamonina izy ireo. Raha mivarotra lalao sy varotra nomerika ianao dia eritrereto ny fampiharana e-poketra izay manohana ny vola crypto.
Raha tsy azonao antoka ny alehanao dia miresaha amin'ny mpanjifanao. Tian'ny rehetra ny angatahana hevitra, ary azonao atao ny manova izany amin'ny tombotsoanao amin'ny fanolorana fanadihadiana fohy. Anontanio ny mpividy anao hoe inona no tian'izy ireo hojerena ao amin'ny magazinao. Ahoana no hanatsaranao ny traikefany amin'ny fiantsenana, ary ny fomba fandoavam-bola izay ahitan'izy ireo fa mahazo aina indrindra. Hanome anao làlana tsara ho an'ny fanavaozana ho avy izany.
E-varotra dia misy ho an'ny rehetra. Nanamora ny fivarotana entam-barotra amin'ny olona rehetra na aiza na aiza… Ary mafy be tamin'izany fotoana izany. Ny siansa sy ny antontan'isa ao ambadik'io tsena miovaova io dia tsy mora entina.
Ny toe-tsain'ny mpanjifa antonony dia niova be tao anatin'ny 10 taona lasa ary tokony hanao zavatra mifanaraka amin'izany ianao. Mianara sy mampifanaraka, satria ny hafainganam-pivoaran'ny tontolon'ny nomerika dia mampitsoka ny saina.
Tags: amazon paykarama androidkitapom-batsy nomerikae-varotramanatsara ny tahan'ny fiovam-pofinday fampiharanafampiharana findayfampielezan-kevitra amin'ny findayfifanakalozana findaytaham-panovana findayfizarana tsena findaympivarotra antsinjaranytranokala finday vs fampiharana findayisan'ny mpividy finday ato aminayfizahana visa